Joe Biden Oo Ku Guuleystay Madaxtinimada Mareykanka | Hayaan News
Joe Biden Oo Ku Guuleystay Madaxtinimada Mareykanka
November 8, 2020 - Written by admin
USA(Hayaannews): Musharraxii xisbiga Dimuquraadiga, Madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden, ayaa loo saadaaliyay inuu ku guuleysanayo doorashada Madaxtinimada Mareykanka ee Salaasadii ay dadweynuhu u dareereen.
Biden ayaa noqonaya madaxweynihii 46-aad ee Mareykanka, ka dib markii uu ku guuleystay gobolka uu ku dhashay ee Pennsylvania, halkaas oo uu helay 20 cod ergo oo uu u baahnaa si uu u gaaro 270 ka cod ergo ee uu u baahan yahay qofka madaxweyne ka noqonaya dalkan Mareykanka, xitaa haddii lagaga badiyo codadka guud ee dadweynaha.
Ka hor inta uusan noqon murashaxa Dimuquraadiga, Mr. Biden waxa u uku-xigeen u soo noqday Madaxweynihii hore Barack Obama oo uu sideed sano xilkaasi hayay. Sidoo kale waxa uu soo noqday Senatarkii ugu mudada dheeraa ee ka soo gala gobolka Delaware oo uu ku fadhiyay 36 sanadood.
Waxa uu ku dhashay magaalada Scranton ee gobolka Pennsylvania, sanadkii 1942-kii intii uu socday dagaalkii labaad ee aduunka.
Waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu da’a weynaa taariikhda Mareykanka, 20-ka bishan ayuuna noqonayaa 78 jir.
Madaxweynihii ugu da’ada weynaa ee Mareykanka waxa uu ahaa Ronald Reagan, oo ahaa 77 jir ka hor inta uusan xafiiska ka tagin sanadkii 1989-kii.
Isagoo ka jawaabay markii guushiisa la saadaaliyay ayuu fariin uu Twitter-ka soo dhigay ku yiri “Waxaa Sharaf ii ah inaad ii doorateen inaan hogaamiyo dalkeena sharafta badan.”
Guusha Biden ayaa ka dhigeysa Madaxweyne Trump, madaxweynihii sadexaad ee afartankii sanadood ee la soo dhaafay ku guul dareysta in dib loo soo doorto.
Waxaa la caleema saarayaa Mr. Biden bisha January ee sanadka soo socda, markaa oo uu la wareegi doono Xafiiska Madaxweynaha ee Aqalka Cad.
Waxaa kaloo guushan la wadaaga, haweeneyda uu ku xigeenka u doortay Senator Kamala Harris, oo iyadu dhigeysa taariikh ah in ay noqoto haweeneydii ugu horeysay ee Madaxweyne ku xigeen loo doorto, taariikhda Mareykanka ee 244 sana jirka ah.